प्रहरीमा भर्ना खुल्यो, ५ हजार २ सय २७ जनालाई अवसर (विज्ञापनसहित)
कात्तिक १६ गतेदेखि मंसिर २३ गतेसम्म आवेदन पेश गर्न सकिने
निशान न्युज आश्विन ३०, 2077
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले ५ हजार २ सय २७ रिक्त दरबन्दीमा भर्ना आह्वान गरेको छ । नेपाल प्रहरीले प्रहरी जवान (जनपद) पदमा खुला प्रतियोगिताद्धारा पदपूर्ति गर्ने गरी दरखास्त आह्वान गरेको हो ।
नेपाल प्रहरीले ५ हजारभन्दा बढी युवाहरुलाई प्रहरी जवान पदका लागि भर्ना हुन सूचना जारी गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ५ हजार २ सय २७ जना जवान भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो ।
आज प्रकाशित सूचनाअनुासर खुलाबाट २ हजार ८१७, अमर रअशक्त प्रहरी परिवारबाट १०५ जना प्रहरी जवान छनौट गरिने सूचनामा उल्लेख छ । समावेशी समुह अन्तर्गत महिला तर्फ ४६१, आदिवासी जनजाति महिला तर्फ ७३७, मधेसीबाट ६४६, दलितबाट ३४५ र पिछडा क्षेत्रबाट ११६ जना प्रहरी जवान छनौट गरीनेछ ।
यो पदमा भर्ना हुन न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ८ कक्षा उत्तीर्ण तोकिएको छ । प्रहरी जवान पदमा भर्ना हुन चाहने इच्छुक नेपाली नागरिकले कात्तिक १६ गतेदेखि मंसिर २३ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।
देशभरका ७४ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ७ वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालय र काठमाडौं उपत्यकका तीनवटा प्रहरी परिसर (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) मा दरखास्त दिन सकिने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
प्रहरी जवान पदका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ८ कक्षा उत्तीर्ण तोकिएको छ । प्रहरी जवान पदमा भर्ना हुन चाहने इच्छुक नेपाली नागरिकले कात्तिक १६ गतेदेखि मंसिर २३ गतेसम्म आवेदन पेश गर्न सक्नेछन् ।
काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले रोकिएका सम्पूर्ण परीक्षा दशैँअघि गरिसक्ने गरी आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ...
जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर २ को लोक सेवा आयोगले विज्ञापन खोल्न सुरुवात गरेको छ । आयोगले प्रदेश निजा...
प्रदेश १ को लोकसेवा आयोग कार्यालयले माग्यो कर्मचारी, कुन पदमा कति जनाको खुल्यो विज्ञापन ? (विज्ञापनसहित)
विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ को लोकसेवा आयोग कार्यालयले कर्मचारीको माग गरेको छ । आयोगले आज सार्वजनिक...
काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले नायब सुब्बा (नासु) पदमा ८४३ जनाका लागि विज्ञापन खुलाएको छ । खुल्लाबाट ...
नेपाल प्रहरीमा ३६० जनाका लागि जागिर खुल्यो, कुन कुन ठाउँबाट आवदेन दिन पाइन्छ ? (सुचनासहित)
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले ३ सय ६० जना कार्यालय सहयोगीको लागि विज्ञापन खुला गरेको छ । प्रहरी प्रधा...
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले ५ हजार २ सय २७ रिक्त दरबन्दीमा भर्ना आह्वान गरेको छ । नेपाल प्रहरीले प्...